ဘာသာခြားကမေးရင် ဘယ်လိုဖြေမလဲ (မြန်မာအင်္ဂလိပ်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဘာသာခြားကမေးရင် ဘယ်လိုဖြေမလဲ (မြန်မာအင်္ဂလိပ်)
ဘာသာခြားကမေးရင် ဘယ်လိုဖြေမလဲ (မြန်မာအင်္ဂလိပ်)
Posted by ဆန်နီနေမင်း on Mar 10, 2012 in Copy/Paste |4comments
မေး။ ။ အရှင်ဘုရား တပည့်တော် အစ္စလမ်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ခြားနားချက်မေးခွန်းအနည်းငယ်ကို သိလိုပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်သူငယ်ချင်း အစ္စလမ်တစ်ယောက် ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မေးတဲ့အခါ တပည့်တော်ရှင်းလင်းအောင် မဖြေပေးနိုင်တဲ့အရာတွေရှိနေလို့မို့ တပည့်တော်မေးတဲ့ မေးခွန်းများကို အင်္ဂလိပ်လို ပြန်ဖြေပေးစေချင်ပါတယ်ဘုရား။
၁။ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေက ကမ္ဘာမြေ၊ လ၊ နေ၊ တိရစ္ဆာန်၊ လူစတဲ့အရာအားလုံးကို အလ္လာဟ်က ဖန်ဆင်းထားတယ်လို့ ပြောတယ်ဘုရား။ အဲဒါနဲ့ တပည့်တော်က ဗုဒ္ဓဘာသာမှာက ဘာပဲလုပ်လုပ် ကံကံရဲ့အကျိုးကြောင့် ဖြစ်တယ်။ ကံကံရဲ့အကျိုးတရားအတိုင်း ပြန်လည်ခံစားရတယ်လို့ ပြောတဲ့အခါ သူငယ်ချင်းက ဒါဆို ကမ္ဘာမြေ၊ လ၊ နေ၊ တိရစ္ဆာန်၊ လူစတာတွေဟာ ဘယ်လိုလုပ်ပေါ်ပေါက်လာသလဲလို့ မေးပါတယ်။ ဒါနဲ့ တပည့်တော်က မင့်တို့အလ္လာဟ်ကိုရော ဘယ်သူဖန်ဆင်းသလဲလို့ ပြန်မေးတဲ့အခါ သူက မသိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ သူက သူ့ဘာသာအကြောင်း မရှင်းပြတတ်ပေမဲ့ တပည့်တော်က ကိုယ့်ဘာသာအကြောင်း ရှင်းပြချင်လို့ ဒီမေးခွန်းကို ဖြေပေးပါဦးဘုရား။
၂။ တပည့်တော်တို့ဟာ သူတစ်ပါးအသက်သတ်ရင်တော့ အပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ဘာဖြစ်လို့ အသားငါးကျတော့ စားကြတာလဲတဲ့၊ အသားငါးစားတာဟာလည်း သူတစ်ပါးအသက်သတ်သလို ဖြစ်မနေဘူးလားတဲ့။ ဒါနဲ့ တပည့်တော်က ကိုယ်တိုင်မသတ်ဘူး။ သူများရောင်းလို့ ၀ယ်စားတာ၊ ရောင်းတဲ့လူမရှိရင် မစားဘူးလို့ပြောတဲ့အခါ သူငယ်ချင်းက ၀ယ်စားတာဟာလည်း ရောင်းတဲ့လူသတ်အောင် အားပေးသလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် အပြစ်မဖြစ်ဘူးလားလို့ မေးပါတယ်ဘုရား။
၃။ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ဘာကိုယုံကြည်ပါသလဲလို့ မေးပါတယ်ဘုရား။
၄။ ဗုဒ္ဓဆိုတာ ဘယ်သူလဲ။ ဗုဒ္ဓဟာ လူတစ်ယောက်ဆိုရင် မင့်တို့က ဘာဖြစ်လို့ ရှိခိုးရိုသေပေးနေရတာလဲ၊ သူ့မှာ တန်ခိုးတွေ မရှိဘူးလားလို့ မေးပါတယ်ဘုရား။ ဒီမေးခွန်းတွေကို တပည့်တော်လည်း တက်နိုင်သလောက်တော့ ဖြေပေးပါတယ်ဘုရား။ ဒါပေမဲ့ တပည့်တော် တိတိကျကျမဖြေနိုင်တာတွေရှိတဲ့အတွက် အရှင်ဘုရားအနေနဲ့ ဖြေပေးဖို့ရန် တောင်းဆိုလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ဘုရား။
တပည့်တော်ဟာ ဒူဘိုင်းမှာနေတဲ့လူမို့ အဲဒီကမူစလင်လူတွေနဲ့ပဲပေါင်းသင်းနေရပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာသူငယ်ချင်းမရှိတဲ့အတွက် သူငယ်ချင်းမူစလင်တွေက ကိုယ့်ဘာသာအကြောင်းမေးရင် သေချာမရှင်းပြနိုင်လို့ အခုမေးခွန်းတွေကို တပည့်တော်အားသနားသဖြင့် ဖြေဆိုပေးပါရန် လျှောက်ထားတောင်းပန်းအပ်သည်အရှင်ဘုရား။ ဦးတင်ပါတယ်ဘုရား။
ကမ္ဘာမြေ၊ လ၊ နေ၊ လူစတဲ့အရာတွေဟာ လောကကြီးထဲမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ သဘာဝတရားတွေမို့ တစ်စုံတစ်ယောက်မှ ဖန်ဆင်းထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လောကမှာရှိတဲ့အရာတွေဟာ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေကြီးပါပဲ။ ရှေးယခင်အချိန်ကာလများစွာက နေ၊ လတို့မဖြစ်ပေါ်သေးတာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခါတုန်းက နေလတို့မရှိတဲ့အတွက် ကမ္ဘာလောကကြီးဟာ အမှောင်ထုကြီးပဲ တည်ရှိနေခဲ့ရတာပါ။ နောက်ပိုင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နေလတို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျမှ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလင်းရောင်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို နေတွေလတွေပေါ်လာလို့ အလင်းရောင်ရရှိခဲ့တဲ့အခါကျမှသာလျှင် နှစ်၊ လ၊ ရက်၊ ရာသီဥတုတွေကို လူတွေက သတ်မှတ်လာခဲ့ကြတာပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ အယူအဆအတိုင်း အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်လာတာလား၊ ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒတို့ရဲ့ ဖန်ဆင်းထားလို့ အရာဝတ္ထုလူတွေ ဖြစ်လာတာလားဆိုတာကို ရှင်းလင်းနားလည်အောင် ဥပမာပေးလေးတစ်ခုနဲ့ နှိုင်းယဉ်ပြောပြပေးပါမယ်။ မောင်နီဆိုတဲ့လူတစ်ယောက် ဖြစ်လာတာဟာ ဖန်ဆင်းရှင်က ဖန်ဆင်းပေးလို့ ဖြစ်လာတာလား။ သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးအတူအိပ်ခဲ့ကြလို့ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ရဲ့ သွေးသားတွေ ရောစပ်ပေးလိုက်လို့ ဖြစ်လာတာလားဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ရာမဆို အကြောင်းတရားမရှိဘဲ အကျိုးတရားဖြစ်မလာနိုင်ဘဲနဲ့ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးတရားရလာဒ်များ ပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားစွာ သိမြင်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆို လောကရှိအရာများဟာ ဘယ်သူမှဖန်ဆင်းပေးလို့မဟုတ်ဘဲ အကြောင်းတရားရှိခြင်းကြောင့် အကျိုးတရားတွေ ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေဆိုတာ သိလောက်မယ်ထင်ပါတယ်။
အရာအားလုံးမှာ အတိတ်၊ မျက်မှောက်ဆိုတဲ့ ကြောင်းကျိုးလှုပ်ရှားပြုလုပ်မှုတွေကြောင့် ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေ ဖြစ်လာကြတာပါ။ မိမိက ပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် မိမိထံမှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေရောက်လာမှဖြစ်ပြီး မိမိက သူတစ်ပါးစိတ်ထိခိုက်အောင် လုပ်ခဲ့ပေးမယ်ဆိုရင် မိမိဆီကိုလည်း စိတ်ဒုက္ခရောက်စရာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် မိမိတို့ရောက်ချင်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ကိုလည်း မိမိတို့ဘာသာရောက်အောင် ပြုလုပ်ကြတာဖြစ်သလို မိမိတို့မရောက်ချင်တဲ့ ငရဲပြည်ကိုလည်း မိမိဘာသာပြုလုပ်ကြလို့ သွားကြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးသူများဖြစ်ပြီး မိမိတို့ကံကြမ္မာကို မိမိတို့ဘာသာ ပြုလုပ်ကြတာပါ။
ဥပမာ-ကြည့်မှန်တစ်ခုကိုယူပြီး အဲဒီမှန်ကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ မိမိမျက်နှာက ပြုံးနေရင် မှန်ထဲမှာ ပြုံးနေပုံလေး မြင်ရမှာဖြစ်သလို မိမိက ဒေါသထွက်စိတ်တိုနေပုံနဲ့ မှန်ကိုကြည့်ရင် မှန်ထဲမှာ အဲဒီအတိုင်းပဲ မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီပြုံးပျော်ရွှင်ဝမ်းနည်းမှု ဒေါသထွက်မှုတွေကို တခြားတစ်စုံတစ်ယောက်က ဖန်ဆင်းပေးလို့ မှန်ထဲမှာပေါ်လာတာမဟုတ်ဘဲ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဖန်ဆင်းလို့ မိမိတို့ဖန်ဆင်းသလို မှန်ထဲမှာ ပုံရိပ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မိမိတို့က မျက်မှောက်မှာ သူတစ်ပါးကောင်းစားအောင်၊ သူတစ်ပါးအပေါ် စိတ်ထားကောင်းနဲ့ပြုလုပ်ပေးရင် အဲဒီပြုလုပ်ပေးတဲ့အရာတွေဟာ မိမိပြုလုပ်တဲ့အတိုင်း မှန်တွင်ပေါ်လာသလို ပြန်လည်ပုံဖော်ပေးမှာမို့ မိမိပုံဖော်ခဲ့တဲ့အတိုင်း ပြန်လည်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ မိမိက သူတော်ကောင်းအလုပ်လုပ်ရင် သူတော်ကောင်းအကျိုး ခံစားရမှာဖြစ်ပြီး မိမိက သူယုတ်မာအလုပ်လုပ်ရင် သူယုတ်မာအကျိုးကို ခံစားရပါမယ်။ မိမိက အများအကျိုးလုပ်ပေးရင် မိမိမှာလည်း အများကပြန်လည်ပေးဆပ်ကြမဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ ပြန်လည်ရရှိမှာပါ။
မိမိက ကြည့်မှန်ထဲမှာ မျက်နှာကြီးရှုံ့မဲပြပြီး မှန်ထဲမှာ ပြုံရွှင်နေတဲ့ပုံစံလေး ပြန်ပေါ်လာချင်လို့တော့ မရသလို ဘယ်သူကမှလည်း လုပ်ပေးလို့မရပါဘူး။ မိမိစိတ်က ပြုလုပ်တဲ့အတိုင်း မိမိစိတ်မှာ ပြန်လည်သက်ရောက်လာမှာဖြစ်သလို မိမိနှုတ်၊ ကိုယ်တို့နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အရာတွေကလည်း မိမိပြုလုပ်ခဲ့သလို ကောင်းတာဆိုရင် ကောင်းတာပြန်လာမှာဖြစ်ပြီး မကောင်းတာလုပ်ခဲ့ရင် မကောင်းတာတွေ ပြန်လာမှာပါ။ ဒါကြောင့် လူချင်းတူနေပေမဲ့ လှတာ၊ ချမ်းသာတာ၊ ပညာတတ်တာ၊ စိတ်ထားကောင်းတာစတဲ့အချက်တွေဟာ ကိုယ့်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီး အကျိုးပေးနေတာကြောင့် ကွဲပြားနေရတာပါ။ တကယ်လို့ လူအားလုံးကို ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ဦးကသာ ဖန်ဆင်းပေးတာဆိုရင် လူလူချင်းမို့ ကျန်တာတွေလည်း တူနေရပါလိမ့်မယ်။
သက်ရှိမှာတောင် မိမိတို့ဖန်ဆင်းပြုလုပ်ထားတဲ့အတိုင်း ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်သေးတာဆိုရင် သက်မဲ့တွေမှာလည်း အကြောင်းကြောင့် အကျိုးတရားတွေ ဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဆိုတာ ထူးထွေပြောစရာလိုမယ် မထင်ပါ။ ဥပမာ-သက်မဲ့တွေမှာလည်း မိုးရွာရင်၊ မြေသြဇာရှိရင် မြက်ပင်ဟာ ပေါက်လာမှာဖြစ်သလို မိုးမရွာရင်ဖြစ်စေ၊ မြေသြဇာမရှိခဲ့ရင်ဖြစ်စေ မြက်ပင်ဟာ ပေါက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် သက်ရှိ၊ သက်မဲ့အရာအားလုံးဟာ အကြောင်းတရားပေါ်မူတည်ပြီး အကျိုးတရားတွေဖြစ်လာကြတာမို့ မည်သူကမှ ဖန်ဆင်းပေးစရာမလိုသလို ဖန်ဆင်းပေးလို့လည်း မရပါဘူး။
၂။ လူသားတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်သဘာဝကြီးက အသားစားမှဖြစ်မယ်၊ အသားစားမှ လိုအပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်စွမ်းအားတွေရှိပြီး ကျန်းမာအသက်ရှည်မယ်ဆိုရင် အသားကိုစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိမိစားမဲ့အသားဟာ သူ့ဘာသာသူ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြစ်စေ သေပြီးသားသတ္တ၀ါ ဖြစ်နေရပါမယ်။ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း တိရစ္ဆာန်ကို မသတ်ရသလို သူတစ်ပါးကိုလည်း မသတ်ခိုင်းရ၊ မိမိစားမှာဆိုပြီးတော့လည်း သူတစ်ပါးက ပြုလုပ်မပေးရ၊ မိမိပယောဂလုံးဝမပါရပါ။ အဲဒီလိုဆိုရင်တော့ မိမိစားတဲ့အသားရဲ့သက်ရှိတိရစ္ဆာန်ဟာ မိမိနဲ့မည်သို့မည်မျှမှ ပတ်သတ်မှုမရှိတဲ့အတွက် အပြစ်မရှိပါပေ။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ မိမိပယောဂတစ်ခုခုပါခဲ့ရင်ဖြစ်စေ၊ မိမိရှေ့မှာသတ်နေတာကိုမြင်နေရတဲ့ အသားငါးကိုဖြစ်စေ၊ မိမိကြိုတင်မှာထားလို့ သူတစ်ပါးကသတ်ပေးလိုက်ရင်ဖြစ်စေ အဲဒီလိုအသားငါးများကို စားမယ်ဆိုရင်တော့ မိမိမှာလည်း အပြစ်ရှိတာမို့ ကံကြမ္မာဆိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။
တချို့သောလူတွေဟာ အသားငါးတော့ မစားကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျတော့ ညစ်ပစ်ယုတ်မာကြပါတယ်။ အဲဒီလို လူတွေနဲ့စာရင် စိတ်ဓာတ်ကောင်းပြီး အသားငါးစားတဲ့လူတွေကို လူကောင်းလို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ အသားငါးစားမှ ကျန်းမာသက်ရှည်မှာမို့ဖြစ်စေ၊ သစ်သီးသစ်ရွက်နဲ့ အသက်ဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ရင်ဖြစ်စေ စိတ်ဓာတ်ကောင်းဖို့သည် အဓိကအကျဆုံးဖြစ်တာမို့ မိမိပယောဂမပါတဲ့ အသားငါးဆို စားချင်ပါက စားနိုင်ကြပါတယ်။
၃။ ရေကန်ထဲကို ကျောက်ခဲတစ်လုံး ပစ်လိုက်တဲ့အခါ အဲဒီကျောက်ခဲပစ်ချလိုက်တဲ့အရှိန်ကြောင့် ရေလေးတွေဟာ နဘေးကို လွင့်စင်သွားကြပေမဲ့ အချိန်တန်တဲ့အခါကျတော့ အဲဒီပစ်လိုက်တဲ့ ကျောက်ခဲဆီကိုပဲ ရေလေးတွေ ပြန်လာကြပါတယ်။ ဘောလုံးတစ်လုံးနဲ့ နံရံတစ်ခုကို ကန်လိုက်တဲ့အခါ မိမိကန်လိုက်တဲ့ဘောလုံးလေးဟာ နံရံကိုမှန်ပြီး မိမိဆီကိုပဲ ပြန်လာသလို မိမိလုပ်တဲ့ ကောင်းကံမကောင်းကံဟာ မိမိဆီပဲပြန်လာကြတာမို့ အဲဒါကို မလွဲမသွေ ခံစားကြရပါတယ်။ မိမိက ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းကျိုးတွေပြန်လာမှာဖြစ်သလို မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းကျိုးတွေ မိမိဆီကို ပြန်လာမှာ အမှန်ပါ။ ဒါတွေဟာ သဘာဝတရားတစ်ခုပဲမို့ မည်သူကမှ ဖန်ဆင်းပေးခြင်း မဟုတ်ပါ။
အဲဒီလို မိမိလုပ်တဲ့လုပ်ရပ်တွေ မိမိဆီကို အကျိုးပေးရန်ပြန်လာတဲ့အခါမှာ အောက်ပါအတိုင်း (၄)မျိုးထဲက တစ်မျိုးမျိုးနဲ့တော့ ပြန်လာကြပါတယ်။
၁။ တချို့ ကောင်းကံမကောင်းကံတွေဟာ မျက်မှောက်ဘ၀မှာ အကျိုးပေးတယ်။
၂။ တချို့ ကောင်းကံမကောင်းကံတွေဟာ ဒုတိယဘ၀မှာ အကျိုးပေးတယ်။
၃။ တချို့ ကောင်းကံမကောင်းကံတွေဟာ တတိယဘ၀ကနေ ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိ အကျိုးပေးတယ်။
၄။ တချို့ ကောင်းကံမကောင်းကံတွေဟာ အကျိုးပေးခွင့်မရလိုက်လို့ ပျောက်ပျက်သွားတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ-ကောင်းမှုသေးလေးဟာ ကောင်းမှုကြီးအကျိုးပေးခွင့်ရှိလာတဲ့အခါ ကောင်းမှုကြီးအကျိုးပေးနေလို့ ကောင်းမှုလေးဟာ အကျိုးပေးခွင့်မရဘဲ ပျောက်ပျက်သွားတာမျိုးကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းပြီးသား ရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေဟာ ရှေ့ဆက်ဘ၀ဖြစ်စရာ မရှိတော့လို့ ကောင်းကျိုးခံစားရမှာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက် သူတို့ဘာသာ အေးဆေးနေနိုင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုမနေကြဘဲ သာမန်ရဟန်းများလုပ်တဲ့ ဆွမ်းစားကျောင်းတာဝန်၊ အိမ်သာဆေးတာဝန်တွေကအစ အများအကျိုးပြုလုပ်ပေးကြတာကို အတုယူတတ်မယ်ဆိုရင် မိမိတို့လို ဘ၀အဆုံးမသတ်သေးဘဲ ရှေ့ဆက်လျှောက်ရဦးမဲ့ မိမိတို့ဟာ ပိုမိုပြီးတောင် အများအကျိုး ကောင်းမှုများကို ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရဟန္တာအရှင်မြတ်များကို အတုယူပြီး မိမိတို့ဟာ ကောင်းကျိုးများခံစားရဖို့ ရှိသေးတာကြောင့် အသက်ရှင်စဉ်လေးမှာ ကောင်းမှုများနဲ့ ဘ၀ကိုအဆုံးသတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါလိမ့်မယ်။ ယခု အောက်ဆုံးကံ(၄)မျိုးအကြောင်းကတော့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာများအတွက် သီးသန့်ထပ်ဖြည့်စွက်ပေးလိုက်တာပါ။
၄။ တကယ်တော့ ဗုဒ္ဓဆိုတာ ကိလေသာအမှောင်တွေထဲကနေ ရုန်းကန်နိုးထလာသူ၊ ကိလေသာအမှောင်တွေကို တွန်းလှန်နိုင်သူ၊ လောကရှိအရာအားလုံးကို အမှန်တကယ် သိမြင်သူ၊ မကောင်းမှုအားလုံးကို ပယ်ထုတ်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ယခင်ကလည်း ဒီလိုဗုဒ္ဓတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့သလို အနာဂတ်မှာလည်း ဖြစ်ကြပါလိမ့်ဦးမယ်။ ဗုဒ္ဓဆိုတာ မသိတာမရှိတဲ့ သဗ္ဗညုတဉာဏ်ပိုင်ရှင်ရရှိသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပြင် ဗုဒ္ဓဟာ သူတစ်ပါးအပေါ် သနားကရုဏာကြီးမားသူဖြစ်ပြီး သမာသမတ်စိတ်ထားကောင်းနဲ့ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဟာ ရှေးယခင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကို မှတ်မိခြင်း ပုဗ္ဗေနိဝါသနုဿတိဉာဏ်။ နတ်မျက်စိကဲ့သို့ အဝေးကို ဖောက်ထွင်းသိမြင်နိုင်သော ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်။ ကိလေသာနူနာအားလုံးကို ပယ်သတ်နိုင်သော အာသ၀က္ခယဉာဏ်(၃)မျိုးကို ရရှိထားပါတယ်။
မြတ်ဗုဒ္ဓဟာ သူရရှိတဲ့အဘိဉာဏ်တန်ခိုးတွေကို လူတွေယဉ်ကျေးလာအောင်၊ လူတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်အောင်အတွက် အသုံးမပြုခဲ့ဘဲ တရားဟောတဲ့အခါ၊ နာယူသူအား ဘယ်လိုတရားမျိုးဟောရင် ပိုအကျိုးများမလဲ၊ ဘယ်လိုတရားနဲ့ထိုက်တန်သလဲ၊ ဘယ်သူဟာ ဘယ်ချိန်မှာ တရားထူးရတဲ့သူဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ အများတရားရရှိဖို့အတွက်တော့ တစ်ခါတရံမှာ သူရရှိထားတဲ့ အဘိဉာဏ်တန်ခိုးများကို အသုံးပြုပြီး ဟောကြားလမ်းညွှန်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပြင် ဗုဒ္ဓဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမှန်တရားများဖြစ်တဲ့ ဆင်းရဲခြင်းအမှန်၊ ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမှန်တရား၊ ဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းခြင်းအမှန်တရား။ ဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရာသို့ ဆိုက်ရောက်ကြောင်း လမ်းမှန်တရားတို့ကို သူကိုယ်တိုင်လည်းသိမြင်ပြီး အများကိုလည်း လမ်းညွှန်ဟောပြပေးခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့တရားများဟာ သာမာန်အခြေခံတရားများရော၊ အနက်အဓိပ္ပါယ်လေးနက်တဲ့ တရားများရော ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပြင် စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားပြီး ကောင်းသောအလုပ်များ ဆောင်ရွက်တတ်အောင်၊ မကောင်းမှုအားလုံးတို့ အဆုံးသတ်နိုင်အောင်လည်း သူ့ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာ အမှန်အတိုင်း သိမြင်သမျှအားလုံးတို့ကို ဟောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဟာ ငါတို့ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သလို ကောင်းတာမကောင်းတာကို သိအောင်၊ ပြုလုပ်တတ်အောင် လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ ငါတို့ဟာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ငါတို့အပေါ်ရှိတဲ့ ကျေးဇူးတရား၊ ငါတို့မှာမရှိတဲ့ ပညာစွမ်းအား၊ ကရုဏာစွမ်းအားစတာတွေကို အမြဲတမ်းအာရုံပြုပြီး ရိုသေကန်တော့နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအပေါ်မှာ ကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်ကို ဘယ်သူမဆိုသိတတ်ပြီး ကျေးဇူးဆပ်ရမှာပါ။ ဒါဟာ လောကရဲ့သဘာဝပါ။
ဦးဇင်းမှာ အချိန်မအားပေမဲ့ ဦးဇင်းဒီမေးခွန်းများကို ဖြေမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင် မိမိဘာသာအကြောင်းမရှင်းပြတတ်ဘူးဆိုပြီး ဘာသာခြားက မိမိတို့ဘာသာအပေါ် အထင်သေးမှုများနဲ့ ကြုံတွေ့ရမှာဆိုးလို့ ဦးဇင်း အသိဉာဏ်ဗဟုသုတ၊ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းရှိသလောက် ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆို မေးခွန်းရှင်ရဲ့အဖြေဟာ လုံလောက်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဦးဇင်းအင်္ဂလိပ်စာ မကျွမ်းကျင်သေးလို့ အင်္ဂလိပ်စာအားနည်းမှုများပါရင်လည်း ခွင့်လွတ်နားလည်ပေးကြပါလေ။
ဦးဇင်းရဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်အားလုံး အချိန်တိုင်းမှာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဒုက္ခအားလုံးတို့မှလည်း ကင်းလွတ်ပြီးလျှင် ပန်းတိုင်ကိုလျင်မြန်စွာရောက်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးလျက်…..။
If you want to know about Buddhism you will be able to read this post
I would like to askafew questions regarding with the Islam and Buddhism differences. This is my first time to askaquestion. Kindly please forgive me if there are mistakes. I would like to request that please answer to me in English. It is because the person who asked me about Buddhism is Forigner and I could not translate some of the terms of Burmese Parli into English. My Islamic Friends always ask me about Buddha and I could not translate or explain to him.
Islam belive that the earth, the moon, the sun, day, night, animals, human and everythings are created by Allah. My Muslim Friend asked me that
1. If we (Buddhism) belive that what we do, is what we get (Kamma Result) then in this case, who create human, earth, moon and everything? How these things appear? I could not answer his question. I told him that our Buddha is not creator. I am so sad that I could not explain to him in English although I am Buddhism. I had read that in burmeseclassic.com, one of the post answers is if Allah isacreator of everyone; there has someone who creates Allah. It is because everything is happening likeacircle. I explain to my friend that everything is likeacircle and I asked him there should be someone who creates Allah. He said “No” and I could not explain more to him.
2. I told him killing animal is sin. He asked why I am eating meat if I said killing animal is sin? And he said animals are created by Allah for all the human to eat. Therefore, it is no sin. I told him, we did not kill the animal. However, there are people who selling the meat. Therefore, we buy and we eat. If the people are not selling meat, we are not going to eat meat at all. But he said somehow it is indirect way we are encouraging to kill the animal and we are getting sin. I am so confuse that am I getting sin because of I am eating meat? How can I explain to him?
3. What Buddhism Believe? (How can I answer this question to non Buddhist person? I told him we belive in Buddha Teaching and practices. Then he asked me what those are. It is really hard for me to explain)
4. Who is the Buddha? (I told him the Buddha is one of the human and he borned and he died. But he found the universal truth. And then my friend asked if he is human like us why u are giving worship to him? Does he have any power? Sayardaw! I do not know how to explain in English. What do I understand in English is Buddha has power and when he met with Da wa dat, he show fire, water comes out from nose and mouth at the same time. Could you please explain to me properly in terms with English? And also in order to becomeaBuddha, he has to pass many lifes and finally he can be the Buddha. Oh. I really could not explain although I understand in Burmese)
Sayadaw! I am asking this question is I do not want to give wrong idea of Buddhist or Buddhism to some one who is enthusiastic to know about Buddhism. I really want to explain to him very well. Now I am trying to read “The Teachings of The Buddha” (Basic Level) by Ministry of Religious Affairs. However, many of the word written in Sanskrit and it is hard to understand. Therefore, I really appreciate if Sayardaw can answer my questions.
I am staying at the United Arab Emirates and most of the people here is Muslim and I do not have Buddhist friends here who I can disucss or ask in English. Kindly allow me to ask more questions in future.
Please forgive me to write with “I, you, he, or she”
I am aspecting you Bante.
No one creates human, the earth, the moon and everything because that is nature in the world. As long as the moon and sun have not arisen in the world, so long as there is nothing shining forthagreat light of great radiance. There prevails gross darkness. Later when the moon and the sun rise in the world, thenagreat light of great radiance shine forth and gross darkness is not in the world the months, the half-moon and the seasons of years are.
For example about creation that if your parents don’t sleep together or don’t blend their blood you will not be able beahuman. In this way, other everything is the result of their own past and present actions. That’s why we ourselves are responsible for our own happiness and misery. We create our own Heaven. We create our own Hell. We are the architects of our own fate.
Bringamirror and look at it, you will see yourself in the mirror. When you are happy your face would be bright, when you are sad your face will be frown, when you are angry your face will be red and ugly. Is that right? Now answer me who create your happy face, who create your frown face, who create your ugly face?
The God believer was thinking your different faces reflected by the different mood (state of the mind) is the creator of the faces.
Your inner mind is your own Creator. Your face always reflected on your mind or mood (state of mind), if you have anger, greedy, delusion your face will show ugly, and frown. Your mind can change your face in this present life, as well as your future life, or next life. If you are dwelling in anger, hatred, greed, and delusion, your next life will be the same as your face showing in the mirror. Now you will see who isaCreator? If you wanted to be haven, you should abstain from bad mood, like anger, hatred, greed, and delusion. If your mind is under the influence of this bad mood, your future and next life will be misery. Finally he understood that “Our Mind is our own Creator.” That is what I have explained to those who believe in God or Creator from the aspect of Buddhism .All living beings have actions (Karma) as their own, their inheritance, their congenital cause, their refuge. It is Karma that differentiates beings into low and high states.
When we are really necessary for survival we are allowed to eat meat but you obviously don’t say one should kill an animal. You are harmful to humans and animals yourself or someone has said to doing if you are going to feel negative fate. According to the needs of our body for health we should eat meat some time because I think that we will not be surviving foralong time with vegetable. That’s why, you haven’t been hard-working to death the animal and if you haven’t wanted to die you will probably eat meat. Some people don’t eat meat but they are not honest. That is better than dishonest one. If universal people refrain from eating meat, it will be more peaceful the universe.
When we throwastone into the lake, the water splash away from the stone but later it comes back to the stone. When we play football on the wall, it come will back to us. In this way, if you do good or evil you will return them. That is natural law and the mainest of our religion.
In general, Buddha means Awakened One, someone who has awakened from the sleep of ignorance and sees things as they really are. The Buddha wasaperson who has eliminated from all faults and mental obstructions. There were many people who have become Buddhas in the past, and many people wil be able to becomeaBuddha in the future. There is nothing that the Buddha does not know. Moreover, the Buddha has great compassion which is completely impartial.
The Buddha has attained three kinds of Power. There are-
Pubbe-nivasanussati- remembrance of former existences power.
Dibba-cakkhu- divine eye power.
Asavakkhaya-extinction of all cankers power.
But most of the time He hasn’t used his powers to tame or control the people. The Buddha has used sometime to make them devotional has faith in Dhamma. Moreover, the Buddha taught us the universal Truth; this is suffering; this is the arising of suffering; this is the ceasing of suffering; this is the approach to the ceasing of suffering. His teaching was basically simple and meaningful then to put an end to evil; to fulfil all good; to purify the mind. This is the advice of all the Buddhas. So, the Buddha is our benefactor and guide. That’s why we always have been respecting to Him. If someone has been beneficial we will have to be grateful to him. That is natural law.
I don’t have free time but if I haven’t been answering your questions you are going to experience difficult. So, I am answering as knowledge as English language. I think these answers enough for your questions.
I haven’t just been cleaver English language if weaking should abide me
I wish that all my Dhamma friends and kiths will have to be happy every time and then will be able to free from too much suffering in the world.
Ashin Komala or Sanninaymin
တပည့်တော် တို့က ဒီလောက်အများကြီး ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖတ်ရမှာလည်း အများကြီးလေ နည်းနည်း ဆီ ရေးလို့မရဘူးလား ဘုရား
ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်အရှင်ဘုရား…….အဲလိုရှင်းပြမှ ရှင်းပါလိမ့်မယ်…….
ဦးဇင်း ရှင်းလင်းစာကို နာယူမှတ်သား ဖတ်ရှု့သွားပါတယ် အရှင်ဘုရား……..
တပည့်တော်မလည်း မအားတဲ့ကြားက ဖတ်တော့ဖတ်ပါတယ်ဘုန်းဘုန်းနဲနဲဆီရေးစေချင်ပါတယ် ဘုရား